» पदक दिने र लिने दुवैप्रति ओलिको आरोप किन?
३ आश्विन २०७८, आईतवार १६:४०
काठमाण्डौ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संविधान जारी भएसँगै राजनीतिक परिवर्तनको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको दाबी गर्नुभएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा नेकपा एमालेले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संविधानले परिवर्तनको ढोका खोलिसकेकाले थप संघर्षको आवश्यकता नरहेको दावी गर्नुभएको हो ।
उहाँले संविधान निर्माणमा एमालेले अग्रणी भूमिका खेलेकाले यसको सफल कार्यान्वयनमा पनि एमालेले नै नेतृत्व गर्ने पनि बताउनुभयो । विभिन्न प्रवृत्ति र भिन्नताहरूलाई सहमत गराएर संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन एमालेले अगुवाइ गरेको ओलीको दाबी छ।
संविधान जारी भएपछि त्यसको असन्तुष्टिमा नाकाबन्दीको सामान गर्नुपरेको भन्दै उहाँले एमालेले नै त्यसको सफलतापूर्वक प्रतिवाद गरेको जिकिर गर्नुभयो ।
“एउटाको सुपुत्रलाई सम्मान,अर्कोको सुपुत्रलाई सम्मान,अर्कोको सुपुत्रीलाई सम्मान,अर्काको छोरो महान समाजसेवी,अर्कोको छोरी महान समाजसेवी,कस्तो विडम्बना यो देशको ? कस्ता भोका जुका पुगेका छन् शासनमा ? लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा ।’
‘संविधान ऐतिहासिक दस्तावेज हो । यसको निर्माणमा हाम्रो पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र आगामी दिनमा यसको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि लागिरहन्छौँ’, ओलीले भन्नुभयो ।
आन्दोलनको सफलताका रुपमा संविधान आएको भन्दै ओलीले बलिदान गर्ने सहिदहरुको सपना पूरा भएको पनि बताउनुभयो । संविधान निर्माणसंगै जनताको सार्वभौमिकताको सुनिश्चितता र संविधानको सर्वोच्चता कायम भएकाले संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा समेत मनाउन उहाँले आव्हान गर्नुभयो ।
सम्बोधनका क्रममा ओलीले संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले गरेको पदक वितरणप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउनुभयो । नेताका आफन्तलाई पदक बाँडिएकोमा ओलीले कटाक्षपूर्ण टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो,’संविधान दिवसलाई जनताले आफ्नो संविधान दिवस ठान्नुपर्ने, यतिबेला जनताका पराक्रमी सन्तानले सम्मानित भएको अनुभूति गर्न,गर्व गर्न पाउनुपर्नेमा बालाई सम्मान,श्रीमतीलाई सम्मान गरिएको छ ।
अघिल्लो पटकको पनि म सम्झन चाहन्छु । एउटाको सुपुत्रलाई सम्मान,अर्कोको सुपुत्रलाई सम्मान,अर्कोको सुपुत्रीलाई सम्मान,अर्काको छोरो महान समाजसेवी,अर्कोको छोरी महान समाजसेवी,कस्तो विडम्बना यो देशको ? कस्ता भोका जुका पुगेका छन् शासनमा ? लाज लाग्छ संविधान दिवसका दिन बोल्दा ।’